Matanga emabhiza | Noti Mahosi
Mabhuroko Ndiyo nzvimbo inovata zvipfuyo zvedu, saka tinofanirwa kuva nazvo zvakakodzerana navo, nekuti ipapo matambudziko anouya zviri nyore, nematambudziko ganda kana kunyangwe mune dzimwe nzvimbo. Tinofanira kufunga nezvehuwandu hwakawanda patinoungana nekuchengetedza matanga, kunyanya padanho rehutsanana.
Mune ino nzvimbo iwe unowana, matipi, zvigadzirwa uye mazano saka kuti mabhiza edu ane mabhuroko mashoma kune ako manyorerwo uye zvaunoda. Rangarira kuti ruzivo isimba uye zvinonyanya kukosha tinogona kuunganidza zvirinani, kwatiri nekwedu mhuka. Usakanganwa kuti kwavari chigariro chakaita sekamuri yedu kwatiri uye kuti zvirinani zvinoenderana nemhuka, zvimwe zvichabereka zvine chekuita nezvisungo zvaro, ingave mitambo kana kwete.
Ivo vakomana vakatsiga: mabasa uye mabasa
Mukomana akatsiga ndeuyo ari pamusoro pekuchengetwa uye kugara zvakanaka kweequines. Basa rako kudzora ...
Zvidobi zvekuita kuti mane bhiza apenye
Bhiza rinogona kunge riri rimwe remitezo yehumambo hwemhuka iyo inotamisa runako uye runako. Kubwinya kwake kukuru ...
Kugadziriswa kwebhokisi kana kudhara
kubudikidza rose sanchez inoita 6 makore .
Kuchengetwa kwebhiza pamwe nehutsanana hwaro kwakakosha senge kabhini irimo, ndiko kuti ...
kubudikidza rose sanchez inoita 8 makore .
Kugadzikana kunoreva kuve nebhiza rakavharirwa mune ino kesi mu: the solid, stable or box, uye inzvimbo ...
Kukosha kwetsika mumabhiza
kubudikidza danigraffi inoita 10 makore .
Iyo tsika muhupenyu hwemabhiza yakakosha kukosha, uchifunga kuti chero shanduko kamwe kamwe inogona ...
Maitiro echisikigo emabhiza
Mabhiza ane maitiro akasiyana kwazvo zvinoenderana nehunhu hwese, asi izvo zvatinogona kuvimbisa ...
Kana bhiza riri mumatanga kwenguva yakareba rinotanga kuita maitiro akashata, semuenzaniso ivo vanotanga ...
Kufamba kwe nzeve dzebhiza kunorevei?
Tese isu tinopedza mazuva edu neequines tinokwanisa kuona kufamba kwenzeve, iyo isina chinhu ...
Maitiro ekuvaka danga
Matanga ndiwo anodikanwa kune isu tese tinogara mune yanhasi nyika, saka zvingave nhema kutaura ...
Nzira yekudzivisa kugumbuka mabhiza
kubudikidza danigraffi inoita 11 makore .
Muzviitiko zvakawanda tinoona kuti mabhiza anowanzo gumburwa, zvese mumatanga ekutasva uye pavanotakura mutasvi, ...
Maitiro ekuita kudhindisa pamabhiza (Chikamu Chekutanga)
Iko kudhinda kunoenderana nekutora mabhiza edu kuti ave nehunyanzvi hwekuenderera mberi kune dzakasiyana siyana zvinokanganisa ne ...